JFK yakadzikira. Mamwe mabhuku ane chimiro chake kumashure | Zvazvino Zvinyorwa
Ivo chete dissassify magwaro nezve kupondwa kwe John Fitzgerald Kennedy, JFK. Mabhuku mazhinji akanyorwa pamusoro peanogona kunge ari mukurumbira mutungamiri munhoroondo yeUnited States. Tinozviona nhasi 5 mazita ane chimiro chake se protagonist kana kumashure, chakasainwa nemazita matatu anozivikanwa emutori wenhau Firipi Shenon nevanyori Stephen King naJames Ellroy. Matatu maonero, nhoroondo uye utapi venhau, sainzi ngano uye fungidziro yakajeka nezve mumwe wevanonyanya kukosha vezana ramakore rechiXNUMX.
1 JFK Nyaya Yakavhurwa - Philip Shenon
3.2 Matanhatu ema greats
3.3 Ropa reVagrant
JFK Nyaya yakavhurwa - Firipi Shenon
Firipi Shenon iye mutori wenhau anoongorora Del The New York Times muWashington, kwaakashanda kubvira 1981. Makanga muri muchirimo cha2008 apo nhare yake yakarira rimwe zuva pasitendi yake yepepanhau. Akanga ari gweta rakakosha uye aive nhengo yevakakurumbira Warren Commission uyo akaongorora kupondwa kweJFK. Iye murume akamubvunza kuti ataure izvo nhengo dzekomisheni iyoyo dzaiziva avo vachiri vapenyu.
Saka mutori wenhau akatanga basa remakore mashanu ku kuvaka zvakare yakavanzika nhoroondo yeimwe yeakakosha uye ane gakava kuferefetwa kwechiitiko chezana ramakore rapfuura. Asi bhuku iri raireva zvakawanda. Shenon akawana kuti chokwadi chikuru nezve kuurayiwa kwaKennedy chakanga chisati chaudzwa, uye vazhinji humbowo hwakanga hwakavanzwa kana kuparadzwa neCIA, FBI nevamwe vanhu vane simba muWashington.
Kubva mazana ekubvunzurudzwa uye kuwana kunhengo idzi dzichiripo dzeWarren Commission uye nevamwe vapikisi, Shenon akavaka Anenge akajeka nhoroondo yekuurayiwa kwaJFK uye kutadza kuferefetwa. Isu tinowanawo zvinyorwa zvinozivikanwa zvenguva iyoyo senge Jacqueline Kennedy naRobert Kennedy, J. Edgar Hoover kana Lyndon B. Johnson.
Aigotadza sei kushinga neJFK tenzi asingatarisirwi wekutyisa uye zvinopfuura kubereka Stephen King? Saka mugore ra2012 ndakaburitsa bhuku iri nenyaya ye Jake epping, mudzidzisi weChirungu mutaundi diki muMaine. Rimwe zuva mumwe wevadzidzi vake vakuru, Harry Dunning, nyora rondedzero inokukanganisa. Dingindira rakarongedzerwa raive "Zuva Rangu Hupenyu Hwachinja" uye Dunning akarondedzera zvakaitika usiku husiku baba vake pavakauya kumba vakadhakwa uye vakapwanya mai vake, mukoma nemunin'ina kusvika pakufa. Akakwanisa kuzviponesa.
Nguva pfupi yapfuura, Al, shamwari yaJake, anowana chakavanzika chikuru: mune yekuchengetera yeresitorendi yake yaakawana. musuwo unotungamira kune gore 1958. Al anokumbira Jake kuti adzokere kumashure munguva yekusangana ne mission, zvinova izvo, kudzivirira kuurayiwa kwaKennedy.
saka Jake anoenda kuna 1958 kutanga hupenyu hutsva nehunhu hutsva uye mirira kusvika 1963. Uye zvinomupa nguva yekudanana nemuchengeti wemaraibhurari akanaka. Sadie dunhill, Tsvaga Lee Harvey Oswald uye mhuri yemudzidzi wake Harry Dunning kunzvenga dambudziko rake. Jake anoziva zvakare kuti maminetsi maviri chete anenge apfuura munyika yake paanodzoka. Asi mubvunzo ndewe kuziva zvimwe zvinoshanduka unenge watsamwisa zviito zvako uye kana uchizokwanisa siya mukadzi wehupenyu hwake kumashure kare.
Jack Kennedy anga ari iwo ngano anoverengeka epeji rakanyanya juzi munhoroondo yedu. Aive nekisimusi yechinyakare uye aipfeka kugerwa senge hapana mumwe. […] Jack akaurayiwa panguva yakanakisa kuve nechokwadi hutsvene nenhema zvinoramba zvichitenderera pamurazvo wake wekusingaperi. Ino inguva yekuburitsa urn yake uye kuburitsa pachena varume vashoma vakabatsira mukumuka kwake uye kufambisa kupunzika kwake.
Izvo zvinonyora James ellroy pakutanga kwe America, wekutanga zita reizvi yakakosha trilogy kune wese munhu anofarira nguva iyoyo uye mufananidzo wakajeka kwazvo weavo vatambi. Iyo Imbwa Rabid, master of the crudest and most violence crime novel, akanyora izvi trilogy pasina kubvumirana. Ehe mune yako yakatarwa uye yakasarudzika dhizaini yakanangana, inotyisa, telegraphic, mhirizhonga uye yakaoma.
Zviitiko zvinorondedzerwa muiyi trilogy zvinotanga muna 1958 zvichizopera muna 1972. Ellroy anoshandisa ngano asiwo chokwadi mune kusanganiswa kusinganzwisisike kwezviitiko zvezvakaitika uye vatambi vechokwadi uye vengano vaasina hanya navo. Nhoroondo uye nhema nhema inosangana mune iri basa hombe, rakaoma asi rakasimba uye rinokanganisa zvikuru.
Isu tiri 1958 uye isu tine iyo yakajairwa rondedzero mamiriro neatatu eva protagonists. Pete bondurant, Big Pete, a quebecquois aimbova mugungwa, mupurisa ane huwori, mutengesi weHoward Hughes uye mhondi yemhomho Mickey Cohen. Zvakanakisa Kemper boyd, FBI mumiriri, mutemo akapedza kudzidza nemwanasikana kukoreji. Y Wadhi J. Littell, nyanzvi yekutaurirana yeFBI, ane mwanasikana, aimbova mukadzi, matambudziko edoro, uye gwara asi akatendeka.
Varume vatatu ava vachayambuka hupenyu hwavo mumufananidzo wakasviba waEllroy wemakore iwayo e unyengeri hwezvematongerwo enyika, huori hwemapurisa, dambudziko neCuba nemakakatanwa emarudzi nzira yese kusvika kumazuva pamberi pekuurayiwa kweJFK.
Pano tiri pa 1963 uye protagonists vachiri Pete Bondurant naWard J. Littell. Navo kunoonekwa mumwe mumiriri weFBI, Wayne Tedrow Jr., uyo ane $ 6.000 muhomwe yake anosvika kuDallas kuzouraya Wendell Durfee, mutambi wechitema anopomerwa kubata chibharo nekuuraya. Iye zvino rangano rekunyepedzera rinosanganiswa neicho chaicho chavaive Bobby Kennedy kana Malcom X. Kurwisana kwemadzinza kwakaenderera uye iyo Ku Klux Klan. Mukuwedzera, takafamba Las Vegas kana Vietnam in a pendi inovhundutsa kubva kuma60s.
Musoro wechitatu watotiisa mukati 1968. Martin Luther King naRobert Kennedy vakafa. Saka zvino Wayne Tedrow Jr. Iye mutengesi weheroin, ari kuvaka mafia yemitambo mecca, uye ari kuramba achiwedzera mukufunga kwake. Naiye vanoyambuka Don cructhfield, mutikitivha wepachivande, uye Dwight holly, mumwe mumiririri uye J. Edgar Hoover gororo rakabatikana nemukadzi, Joan Rosen, wavanodaidza kuti Mwarikadzi mutsvuku uye ndicho chinangwa chevatatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » JFK yakadzikira. Mamwe mabhuku ane chimiro chake kumashure